News - Shenzhen MEOKKON ဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်
ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နံနက်ပိုင်းတွင် MEOKON Sensor Technology (Shanghai) Co. , Ltd. ၏ရှန်ကျန်းကုမ္ပဏီခွဲသည်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပသည်။ ရှန်ဟိုင်း MEOKON ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Mr. Andy၊ Chongqing MEOKON ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Mr. Qiu နှင့် Shengzhou MIND ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Mr. Ren တို့သည် Shenzhen MEOKON ၏ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖဲကြိုးဖြတ်ခြင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
Shenzhen MEOKON ကို ၂၀၂၀ မေလတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Chongqing MEOKON နှင့် Shengzhou MIND ပြီးလျှင်တတိယမြောက်လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းသည် MEOKON ၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း၏အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားဈေးကွက်တွင်ရုံးချုပ်၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္assumeကိုယူလိမ့်မည်။ သူသည်စီးပွားရေးအတွေးအမြင်နှင့်ရှန်ဟိုင်း MEOKON ၏စီမံခန့်ခွဲမှုယန္တရားကိုလိုက်နာပြီးစီးပွားရေးကိုကျယ်ပြန့်စွာတိုးချဲ့ရန်နှင့်ဒေသတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဌာနချုပ်မှအရင်းအမြစ်အမြောက်အမြားကိုကောင်းချီးပေးခြင်းနှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်၊ Shenzhen MEOKON သည်တရုတ်တောင်ပိုင်းရှိဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်မားသောရလဒ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ကျိန်းသေပေးမည်ဖြစ်ပြီး MEOKON ၏တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များနှင့်နိုင်ငံ၏ပုံစံကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စအမ်ဘာ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ရှန်ကျန်း MEOKON သည်တရုတ်တောင်ပိုင်းတွင် MEOKON နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး MEOKON လူများ၏ဥာဏ်ပညာနှင့်စွမ်းအားကိုဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်ပါသည်။ ။
Shenzhen MEOKON ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ Grand plan! ကြွယ်ဝသောစွမ်းဆောင်ရည်! Shenzhen MEOKON မှ ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုစိတ်ထားများနှင့်ပြည့်နေလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအသစ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို site ပေါ်တွင်လည်ပတ်ရန်နှင့်လမ်းညွှန်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
လိပ္စာ: Shenzhen 12 City, Baoan ခရိုင်, Xixiang လမ်း, အမှတ် 1220 ~ 1222, ECO International, အဆောက်အ ဦး 8, Xiangbinshan, Zhongxi, Xixiang လမ်း